Agronomy karti leh waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu soo celin karo kharashyada - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Sheekada Guusha
в Sheekada Guusha, Isbeddellada / Isbeddellada
"Agronomy smart waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu soo celin karo lacagtaada," ayuu yiri Ian Wilson, oo maamula Tulloch Farms, oo u dhow Laurenskirk. Fikirkiisa waxaa soo xigtay Baradhada News.
"Waxaan u maleynayaa in anaga beeralayda aan inta badan dhayalsanayno wakhtiga lagu bixiyo beeraha, laakiin saacadaha ku baxa xafiiska qorsheynta qaab dhismeedka beeraha waa dammaanad soo noqoshada maalgashiga. Waxaan jeclaan lahaa in aan qof bixiyo si uu u raaco cagaf si aan runtii uga fikiro dhinacan ganacsiga."
Lixdii sano ee la soo dhaafay, Ian waxa uu maamulay beer dhan 2000 acre oo isku dhafan oo uu leeyahay Martin Gilbert oo ka tirsan Aberdeen Standard. Beertu waxay leedahay 1650 hektar oo shaciir jiilaal ah, kufsi abuurka saliidda leh, miraha iyo sarreenka jiilaalka, waxayna leedahay 250 lo' ah oo si joogto ah u daaqaya.
“Markuu ku tuso cagaf-cagaf, kaliya ma iibsanaysid. Waxaad ka shakisan tahay faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka, waana inay la mid noqotaa kiimikooyinka. Waad ku mahadsan tahay Scottish Agronomy, waxaan haystaa dhammaan xogta farsamada ee imtixaanada ay iskaashatada samaynayso, iyo sidoo kale aqoonta iyo khibradda khabiirka beeraha si ay iiga caawiyaan inaan gaaro go'aamo xog ogaal ah."
Raadinta dib-u-dhigista dib-u-dhigista laga bilaabo badhtamaha Sebtembar si ay ula qabsato culeyska shaqada, Ian wuxuu go'aansaday inuu sameeyo tijaabooyinka beerta wuxuuna la shaqeynayaa Scottish Agronomy si uu u hormariyo todobo nooc oo sarreen ah oo caan ah. Wuxuu beeray hektar mid kasta maalintii ugu horreysay ee Sebtembar isla beertaas, wuxuuna adeegsan doonaa tignoolajiyad la mid ah sannadka oo dhan si uu u arko waxqabad wanaagsan xilli ciyaareedka soo socda.
Ian waa qayb ka mid ah kooxda cilmiga beeraha ee Scottish Agronomy Laurencekirk, wuxuuna ku qiimeeyay doodii miiska jikada - oo hadda ku jira Zoom - aragti cusub oo ku saabsan maalgashiga iyo meesha lacagta lagu badbaadiyo:
“Aqoontii ay beeralayda deegaanku ila wadaageen waxay ahayd mid qiimo leh markii aan u guuray meel aanan garanayn. Aad ayaan u nasiib badanahay inaan ka mid noqdo koox ay ku jiraan dad firfircoon, aragti dheer iyo kuwo ganacsi leh. Wax badan ayaan ka bartay. Waxay iga dhigtay mid hammi badan leh oo aan rabo inaan isku dayo waxyaabo cusub."
Sida laga soo xigtay Ururka La-talinta Dalagyada Madaxa-bannaan (AICC), ku dhawaad ​​kala bar dhulka UK ee wax-beereedka ah waxaa hadda maamula aqoonyahanno beeraley ah oo madax-bannaan, waxaana la filayaa in aaggan uu kordho marka Brexit uu horumaro iyo siyaasado cusub oo beero ah oo la soo saaro.
Tags: cilmi nafsigadaryeel guri
Transbaikalia, baradhada waxaa lagu beeraa si ka dhakhso badan oo ka badan sanadkii hore
Heerka beeritaanka khudaarta iyo baradhada ee Transbaikalia ayaa laba jibaar ka badan sanadka 2021, ayuu yiri wasiirka beeraha ee gobolka Denis...
Guddiga Yurub wuxuu ku baaqayaa waddada cagaaran ee safarka abuurka
Nederlaan waxay soo saartaa kerosene-ka qashinka baradhada